बलिउड / हलिउड Archives - Page3of 58 - Purbeli News
Trending # प्रमोद खरेल10# भूपेन्द्र तुम्बाहाम्फे8# ज्योति मगर8# बोके दाह्री8# दुर्गेश थापा7# दिपाश्री निरौला6# सेन्ट्रल प्लाजा5# पूर्वेली म्युजिक अवार्ड4
काठमाडौं / निर्देशक एसएस राजामौलीले पछिल्लो समय फिल्म ‘आरआरआर’ प्रदर्शनमा व्यस्त छन् । कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण पटक पटक डेट सारिएको फिल्म अन्ततः यही मार्चमा प्रदर्शन हुँदै छ । यसैले गर्दा पनि उनको व्यस्तता बढेको छ । निर्देशक राजमौलीसँगै जुनियर एनटिआर र राम चरणको अभिनय रहेकाले पनि फिल्म प्रतिक्षित छ । यसपछि निर्देशक राजामौलीले के गर्नेछन् त ?...
बलिउडमा डेब्यु तर साउथमा हिट भएकी अभिनेत्री
काठमाडौं / काजल अग्रवाललाई साउथ इन्डियन अभिनेत्री भनेर चिनिन्छ । उनले बलिउडमा सिंघम फिल्ममा अभिनय गरेपछि पहिचान बनाइन् । त्यसअघि उनका साउथ इन्डियन फिल्महरू प्राय प्रदर्शनमा आएका थिए । उनले बलिउडमा सिंघमसँगै स्पेसल २६ र दो लाफ्जोकी कहानीलगायतका फिल्ममा काम गरिसकेकी छिन् । उनलाई सुहाउँदो भूमिकामा बलिउडमा अफर भए अभिनय गर्ने बताउँछिन् । उनले बलिउड फ...
निर्देशनमा फ्लप यी अभिनेता
काठमाडौं / बलिउडमा सफल कलाकारलाई निर्देशकको कुर्सीमा बस्ने ठूलो चाहना हुन्छ । गुरु दत्त र राज कपूरलाई आफ्नो ‘आइडल’ मान्नेवाला कलाकार जब अभिनेताका रुपमा सफलता हासिल गर्छन्, त्यतिबेला उनीहरु निर्देशनमा अवश्य नै हात हाल्छन् । यीमध्ये कमले मात्र सफलता पाउँछन् । यहाँ अभिनयमा सफल तर निर्देशनमा असफल कलाकारहरु प्रस्तुत गरिएको छ । जसमा अनुपम खेरदेखि लिएर सन...
विवाहबारे बोलिन् रश्मिका मन्दाना
काठमाडौं / गीता गोविन्दम र डियर कमरेडमार्फत तेलुगु सुपरस्टारद्वय विजय देवरकोन्डा र रश्मिका मन्दानाको जोडी चर्चामा आयो । विजयलाई ‘अर्जुन रेड्डी’ले नै चर्चामा ल्याए पनि रश्मिकासँगको जोडी दर्शकले रुचाए । फिल्ममा जोडी सुहाएको प्रतिक्रियासँगै यी दुईको सार्वजनिक भिडियोहरूले कतै प्रेममा त छैनन् ? भन्ने चर्चा पनि सुरु भयो । यी दुईले आफुलाई मिल्ने साथीको...
काठमाडौं / हलिउडमा मार्भल स्टुडियोको एभेन्जर्स र डिसीको जस्टिस लिगले पाएको सफलताले पनि सुपरहिरोहरू भनौं वा स्टारलाई एकसाथ ल्याउँदको फाइदा प्रस्ट्याइसकेको छ । बलिउडमा पनि पछिल्लो समय निर्देशक रोहित शेट्टीले ‘कप युनिभर्स’ निर्माण गरिरहेका छन् । उनको फिल्म सिंघम, सिम्बा र सूर्यवंशीलाई उनले एकसाथ फिल्ममा ल्याइसकेका छन् । शेठ्ठीले सिम्बामा सिंघम र स...
लिस्टमै नपरेका सलमान खान फिल्ममा
काठमाडौं / करण जोहरले अधिकांश फिल्ममा शाहरूख खानसँग काम गरेका छन् । उनको करियर स्थापित गर्ने फिल्महरूमा शाहरूखसँगै काजोल पनि छिन् । कुछ कुछ होता है, कभी खुसी कभी गम, कभी अलविदा ना केहना, माइ नेम इज खान लगायतका फिल्मले करणलाई बलिउडमा स्थापित निर्देशक बनायो । करण र शाहरूखले एक अर्कालाई बलिउडमा स्थापित हुन सहयोग गरेको उजागर नै छ । यिनै करणले आफुलाई...
बायोपिक नगर्ने मुडमा रणवीर ?
काठमाडौं / भारतीय अभिनेता रणवीर सिंह र अभिनेत्री दीपिका पादुकोणको मुख्य अभिनय रहेको फिल्म ‘८३’ ले राम्रो व्यपार गर्न सकेन । हिन्दीसँगै तामिल, तेलुगुलगायतका भाषामा रिलिज भएको फिल्मले दर्शकको साथ पाएन । कवीर खानले निर्देशन गरेको फिल्ममा सन् १९८३ का भारतीय क्रिकेट टिमले जितेको विश्वकपको इभेन्टमा आधारित रहेर बनेको छ । भारतीय क्रिकेट टिमलाई कप्तान कप...
टमलाई फिल्म देखाउने तयारीमा आमीर
काठमाडौं / बलिउडमा अभिनेता आमीर खानलाई ‘मिस्टर पर्फेक्टनिस्ट’ पनि भन्ने गरिन्छ । उनले अभिनय गर्ने फिल्महरूमा उनको कामले चर्चा पाउने गरेको छ । पछिल्लो फिल्म ‘ठग्स अफ हिन्दोस्तान’लाई बिर्सन हो भने उनको फिल्मले दर्शकको मन जितेका छन् । आमीर केही वर्षयता ‘लाल सिंह चढ्ढा’ मा व्यस्त छन् । उनले फिल्ममा शीर्ष भूमिका निर्वाह गरेका छन् । सन् १९९४ मा हलिउडमा ट...
आलिया भट्टले भनिन्- प्रेम लुकाउनु पर्ने कारण छैन
काठमाडौं / आलिया भट्ट अभिनित पछिल्लो फिल्म ‘गंगुवाई कठियावाडी’ प्रदर्शनरत छ । केहीले आलियाको अभिनयको प्रशंसा गरेका छन् भने केहीले नसुहाएको प्रतिक्रिया दिइएका छन् । संजयलीला भन्साली निर्देशित फिल्म भएकै कारण ‘गंगुवाई कठियावाडी’ चर्चामा छ । फिल्मसँगै आलियाको चर्चा नहुने कुरै भएन । त्यसो त फिल्मसँगै आलियालाई उनको प्रेम जीवनले पनि चर्चामा ल्याएको छ...
प्याज खाएर सुटिङमा पुग्थे धर्मेन्द्र
काठमाडौं / बलिउडका दिग्गज कलाकारमध्ये एक धर्मेन्द्रसँग जोडिएको धेरै किस्सा र कथा आज पनि सुनिन्छ र सुनाइन्छ । यहाँ धर्मेन्द्रसँग जोडिएको एउटा यस्तै किस्सा छ । यो किस्सा फिल्म ‘आए दिन बहार’को सुटिङताकाको हो । यो किस्सालाई धर्मेन्द्र आफैंले एक टेलिभिजन शोमा सुनाएका छन् । यो फिल्म सन् १९६६ मा रिलिज भएको थियो । यो त्यस समयको हिट फिल्ममा पर्दथ्यो । फि...